"Shan Ilbiriqsi Kasta Baahi Ayaa Qabata" - Gabadha Ay Saaxiibta Yihiin Oxlade-Chamberlain Oo Kashiftay Inuu Cunitaan Ku Waashay Mudada Uu Karantiilka Ku Jiro | Laacib.net
“Shan Ilbiriqsi Kasta Baahi Ayaa Qabata” – Gabadha Ay Saaxiibta Yihiin Oxlade-Chamberlain Oo Kashiftay Inuu Cunitaan Ku Waashay Mudada Uu Karantiilka Ku Jiro
March 25, 2020 Balaleti Comments Off on “Shan Ilbiriqsi Kasta Baahi Ayaa Qabata” – Gabadha Ay Saaxiibta Yihiin Oxlade-Chamberlain Oo Kashiftay Inuu Cunitaan Ku Waashay Mudada Uu Karantiilka Ku Jiro
Gabadha heesta ee Perrie Edwards ayaa si furan uga hadashay nolosha karantiilka ah ee ay kula jirto saaxiibkeeda xiddiga Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain.
Gabadhaan oo ka mid ah kooxda fanka ee Little Mix ayaa shaaca ka qaaday inay iyada iyo Chamberlain go’aansadeen inay karantiil ku galaan gurigooda ku yaala London madaama uu haatan hakad ku jiro xilli ciyaareedka Premier League.
Iyadoo la hadleysay Raadiyaha Kiss, waxay tiri: “Aniga iyo saaxiibkey waxaan guri ku leenahay Manchester, mid kalena waxaan ku leenahay London, sidaasi darteed markii hore waxaan isla joognay Manchester ka dib waxaan go’aansanay inaan u guurno London.
“Waxaa inoo fiicneyd inaan iska sii joogno Manchester bedelkii aan London imaan laheyn, sababtoo ah wax badan oo la sameeyo ayaa jira Manchester.
“Guriga dhexdiisa waan isaga heesnaa, wax karis badan ayaan sameynayaa sababtoo ah saaxiibkeey ma ahan mid dharga, bal isku day inaad la noolaato ciyaaryahan.
“Marka aan isku dayo inaan cuntada diyaariyo maalinta oo dhan, shan ilbiriqsi kasta waxaan maqlaa: ‘Waan baahanahay! Waan baahanahay mar kale. Ma i isiin kartaa cunto haatan?, jawaabteyda waxay noqotaa ‘oo ma kaa dhab baa?”
Horaantii bishaan lamaanahaan ayaa waxay TikTok soo dhigeen muuqaal ay isla qoob ciyaarayaan.
Iyadoo muuqaalkaas ka warameysa waxay tiri: “Aad ayaan u jeclahay TikTok, inaan xilli hore bilaabo ayay aheyd.”